नियात्रा: साइकलबाट संसार घुम्दा... - Kendrabindu Nepal Online News
नियात्रा: साइकलबाट संसार घुम्दा…
११ बर्षे लामो साइकल यात्रामा विश्वका १५२ वटा देशको यात्रा पुरा गरियो । विश्वका पाँचवटा महादेशका १५२ मुलुक साइकलले छिचोल्दा मेरा साइकलका पाङ्ग्राहरु २ लाख १२ हजार ५ सय किलोमिटर गुडिसके छन् । १९९८ को नोभेम्वर २९ मा म शान्तिको सन्देश छर्ने कामना बोकेर साइकलले पृथ्वीको चक्कर लगाउन निस्केको थिएँ । यस जुलाई महिनालाई आफ्नो जीवनकै यो उमंगपूर्ण यात्राको अन्तिम विसौनी बनाउने योजना छ मेरो ।
जतिखेर देश विवशतावस द्वन्दमा फसेको थियो । रोल्पाका सुदुर गाउँहरुमा जनयुद्धका झिल्काहरु छरिदै थिए । त्यहिबेला एउटा नेपाली ठिटोले शान्ती यात्राको थालनी गरेको थियो । आफ्ना जीवनका काहाली लाग्दा बिगत पनि मसँग थिए । १७ बर्षको कलिलो उमेरमै मैले जन्मदिने बाबु गुमाउनु परेको थियो । मेरा बाबु भारतीय सेनामा जागिरे हुनुहुन्थ्यो । आसाममा बडो उग्रबादीहरु द्वारा उहाँको हत्या भयो । म स्वयं पनि आन्दोलनका नायक थिएँ । २०४६ सालको ऐतिहासिक जन आन्दोलनमा होमिदा मेरो दाहिने हातमा गोली लगेको थियो ।
त्यतिबेला देश र जीवनका यिनै तिता बिगतलाई लिएर अनि शान्तीको सम्बाहक बन्दै म विश्वयात्रामा हिंडे । जुन आँटले आज विश्वका सबै भुभागमा पुग्ने नेपाली मात्र हैन विश्वले नै चिनेको साइकलयात्री पनि भइएछ । हिमालको माइनस ५ डिग्रिदेखि मरुभुमीको ं५० डिग्रि तापक्रम सम्ममा पनि म साइकल लिएर दौडिएँ । मसँग कहिले बाटोमा फालिएका सुन्तलाका बोक्रा खाएर टन्न अघाएर हिंडेका छाकहरु छन् । कहिले पिज्जा र बर्गर नरुचेका छाकहरु पनि छन् । फुटपाथमा मस्त निदाएका रातहरु पनि उस्तै छन् । अनि पाँचतारे होटेलमा निन्द्रा नलागेका रातहरु पनि ताजै छन् ।
दोलखाको एउटा सुदुर गाउँमा जन्मेको नेपाली ठिटो म । जतिबेला विश्व यात्रामा जाँदै थिएँ, आमाले दिएको १०० रुपैयाँ बाटो खर्च बोकेर हिंडियो । त्यो पैसा मसँग ११ वर्ष पछि फर्कदा पनि सुरक्षित थियो । फर्किएर आमालाई नै दिएँ । साँच्चै पैसाले संसार घुम्ने हैन रहेछ । जुन कुरा मैले प्रमाणित गरें । हुन पनि हो संसारमा करोडपतीहरु करोडौं होलान् । के उनीहरुले संसार घुमेका छन् त ? संसार घुम्नलाई त इच्छा शक्ती चाहियो । अनि त्याग । आज को यो भौतिक सुख छोडेर आफ्ना जीवनका सुनौलो दिनहरुलाई सडकमा कुदाउनु सरल कुरा हैन । यो कसरी सम्भव भयो ? अहिले सम्झन्छु मेरो त्यागले नै यो सफलता पाएँ । अनि त्याग के का लागि त ? लाग्छ, पक्कै पनि मेरो देश र शान्तीका लागि ।
मलाई विश्व साइकल यात्रामा निस्किदा पागल भन्नेहरु अहिले पनि काठमाडौंमै छन् । फुर्ती गरेर गयो दिल्लीबाट फर्किछ भन्नेहरु अझै जिवित होलान् । अलीकती सहानुभुती देखाउनेले चाँही दिल्लीसम्म पुगी दिए पनि इज्जत बच्थ्यो भन्थें । मलाई सुरुका ति दिनहरु झल्झली याद आइरहेको छ । तर मलाई ति भनाइहरुसँग कुनै गुनासो छैन । हुन पनि त्यतीबेला अवस्था नै त्यस्तै थियो । एउटा नेपालीको छोराले साइकलमा संसार घुम्ने ? कतीले मलाई जापान पस्ने गजब बाटो अपनायो पनि भने । जापानबाट निस्किदा तपाईं त बेब्कुफ भन्ने नेपालीहरु पनि भेटें मैले । जापान छोड्दाको रोचक घटना पनि छ मसँग । संसारको कुनै झिलिमिली, टिलिक्क टल्किएका शहरले मलाई आकर्षण गरेन । टोकियो होस् वा न्यूयोर्क मलाई भुमीगत हुनु थिएन । त्यसैले म दौडि रहे, दौडि रहे । नेपाली झन्डा सानले फहराउदै ।
सगरमाथाको फेदीदेखी प्रशान्त महासागरको किनारसम्म । उत्तर अमेरिकाको रक्की माउन्टेन देखी दक्षिण अमेरिकाको एन्डिज पर्बतमालासम्म । अफ्रिकाको पश्चिम साहारा मरुभुमीदेखी पुर्बी अफ्रिकाको सारंगगेटी फाँटहरु सम्म । म सँग कुनै प्रायोजक थिएन । हरेक दिन मैले मागेर यात्रालाई निरन्तरता दिएँ । मागेर नपुगे पछि काम पनि गरें मैले । म एकदमै राम्रो भाँडा माझ्छु । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको गुन ममाथि सबैभन्दा ठूलो छ ।
तर मलाई गाली गर्ने नेपालीहरु पनि भेटेको छु । को होला त्यस्तो देशको झन्डा बोक्ने मान्छेलाई गाली गर्ने ? राम्रा नराम्रा मान्छे संसारका हरेक कुनामा भेटिन्छन् । मान्छेका गालीले मलाई सुध्रिने अवसर मिल्छ । म पनि मान्छे हुँ , नजानेर कती गल्ती हुन्छन् । तर अनावश्यक गाली चाँही ठीक हुन्न । यात्रा सधैं सरल र सहज बन्दैन । यात्राको क्रममा म दर्जनौ पटक लुटिए । अफ्रिकामा मात्रा सात पटक लुटिएको अनुभव छ मसँग । अफ्रिकाका कतीपय देशहरुमा पाँच डलरको लागि गोली हान्छन् । दुई डलरको गोली, तीन डलर फाईदा । एक पटक न्यूयोर्कमै पनि दस डलर माग्ने लुटेरालाई पैसा छैन भन्दा मलाई झन्डै गोली हानिएको थियो । पछी बिस डलर दिएर म फुत्किएँ ।
मेक्सिकोमा अपहरण पर्दा म मृत्युको नजिकै पुगिसकेको थिएँ । यदी त्यती बेला संघर्ष गर्ने आँट नगरेको भए म त्यहींको माटोमा बिलिन हुन्थें । मर्नु अगाडि संघर्ष किन नगर्ने भनेर मैले अपहरणकारीलाई कुटेर भागेको थिएँ । क्यारेबियन देश बारबाडोजमा पनि टेन्टमा सुतीरहेको ठाउँमा छुरी हान्दा मुस्किलले बचेँको थिएँ । एक पटक हैन दुई पटक हैन दर्जनौं पटक ज्यानलाई जोखिममा पार्दा पनि म हतास भइँन । यो मेरोे शाहस हैन दुःसाहस हो ।
अब त बिश्राम गर्ने हो । जिन्दगी भरीलाई पुग्ने गरी थाकियो । तर मेरो योे थकाई शारिरिक मात्र हो । मानसिक रुपमा अझै केही गर्ने सोचमा छु । भूकम्पले थलिएको गाउँ बनाउनु छ । गाउँलाई संसार पढेको अनुभव बाँढ्ने मन छ । मैले यात्रा अनुभवलाई किताबमा पनि उतारेको छु । मेरोे विश्व यात्राको अनुभवको किताबको नाम ‘संसारलाई साँढे पाँच फन्को’ केहि वर्ष अघि सर्वाधिक रुचाइएको पुस्तक बन्यो । चार खण्डको छ त्यो पुस्तक । साँच्चै संसार नघुम्नेहरुले पनि पुस्तक पढेपछि संसार घुमेको अनुभव गर्न सक्ने छ । जीवनका बाँकी दिनहरुलाई समाजसेवामा बिताउने सोच बनाएको छु । अब राजनीतिलाई मैले टाढा राखेको छु ।
बिगतका कुनै दिनहरुमा मेरो जीवन दर्शन नै राजनीति थियो । तर अब मैले राजनीति लाई धेरै पछाडि छोडेका छु । राजनीति भन्दा धेरै माथि उठेको छु । बिगतका थुप्रै पन्नाहरु गलत ढंगले कोरिएछ । राजनीतिमा लागेर आफ्ना बिगतका पन्नाहरु गलत भएको निश्कर्ष छ म सँग । एउटा शिक्षित र चेतनशिल नागरिकको हैसीयतले म देशको राजनीतिमा अबष्य चासो राख्छु । राजनीति देशको आवश्यकता हो । तर अब मेरो भएन । म आफुलाई देश हाँक्ने नेता हैन , देश निर्माण गर्ने मजदुरको रुपमा उभ्याउन चाहन्छु।
शान्तीका लागि मैले जीवनका थुप्रै सुनौला बर्षहरु सडकमा घिसारें । धेरै उतार चढाबहरु भोगें । संसारलाई प्रत्यक्ष आँखाले देखे। आफ्नै पाइलाले टेकें । शान्ती के रहेछ त ? युद्ध रोकिनु मात्र शान्ती हैन वा बन्दुकको नालबाट गोली छुटन छोड्नु मात्र शान्ती हैन, यो त शान्तीको पहिलो पाइला मात्र हो । जीवनका हरेक पक्षमा खुशीयाली आउनु नै वास्तविक शान्ती हो । वास्तविक शान्तीको लागि अझै लामो यात्रा तय गर्नु छ हामीले ।